Fanavaozana, fanovana, fampitandremana ary famantaranandro amin'ny famantaranandro mahery setra 11.00 alina EST
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Fanavaozana, fanovana, fampitandremana ary famantaranandro amin'ny famantaranandro mahery setra 11.00 alina EST
Ny fampitandremana momba ny rivo-doza ho an'i Etazonia sy ny Nosy Virijina Britanika dia natsahatra araka ny lazain'ny Hurricane Center NWS National Center Miami tamin'ny 11.00 alina EST.
Araka ny filazan'ny National Hurricane Center, ny rivodoza Irma dia manodidina ny 85 kilaometatra avaratra andrefan'ny San Juan Puerto Rico miantra an'i San Juan amin'ny ankapobeny. 315 kilometatra atsinanana atsinanan'ny Nosy Grand Turk. Ny rivotra fara-tampony dia 185 mph amin'izao fotoana izao.
Misy fampitandremana momba ny rivodoza ho an'ny…
* Puerto Rico, Vieques, ary Culebra
* Repoblika Dominikanina manomboka any Cabo Engano ka hatrany amin'ny sisintany avaratra miaraka amin'i Haiti
* Haiti manomboka amin'ny sisintany avaratra miaraka amin'ny Repoblika Dominikana ka hatrany Le Mole St. Nicholas
* Bahamas atsimo atsinanana sy ny nosy Tiorka ary Caicos
* Bahamas afovoany
Hurricane Watch dia manan-kery ho an'ny
* Kiobà avy any amin'ny faritanin'i Matanzas atsinanana mankany amin'ny faritanin'i Guantanamo
* Bahamas andrefana avaratra
Misy fampitandremana amin'ny rivodoza mahery vaika ho an'ny…
* Repoblika Dominikanina manomboka atsimon'ny Cabo Engano miankandrefana ka hatrany amin'ny sisintany atsimo miaraka amin'i Haiti
* Haiti hatrany atsimon'ny Le Mole St. Nicholas ka hatrany Port-Au-Prince
* Faritany Kiobà any Guantanamo, Holguin, ary Las Tunas
Tamin'ny 1100 PM EST (0300 UTC), ny afovoan'i Hurricane Irma dia teo akaikin'ny latitude 19.4 Avaratra, longitude 66.8 West. Irma dia mandroso miankandrefana-avaratra andrefana akaikin'ny 16 mph (26 km / ora), ary ity hetsika mihetsika ity dia antenaina hitohy mandritra ny roa andro manaraka. Amin'ny raharaham-bahiny, ny fototr'izany mampidi-doza an'i Irma dia hitohy handalo fotsiny avaratry ny Puerto Rico anio alina, handalo akaiky na avaratry ny morontsiraky ny Hispaniola alakamisy, ary ho eo akaikin'i Turks sy Caicos ary atsimo atsinanan'i Bahamas amin'ny alakamisy hariva.
Ny rivotra maharitra maharitra dia eo amin'ny 185 mph (295 km / h) miaraka amin'ny rivotra mahery. Irma dia rivodoza sokajy faha-5 amin'ny maherin'ny rivodoza Saffir-Simpson. Ny fiovan'ny toetr'andro sasany dia mety mandritra ny andro manaraka na roa, fa i Irma kosa dia tombanana ho tafio-drivotra mahery sokajy 4 na 5 mandritra ny roa andro manaraka.
Ny rivodoza mahery dia mipaka hatrany amin'ny 50 kilaometatra avy eo afovoany ary ny rivotra tropikaly-tafio-drivotra dia mivoaka hatrany amin'ny 85 km.
Ny tsindry afovoany farany ambany indrindra dia 916 mb (27.05 santimetatra).
VOAFETRA MIKASIKA TANY
FITORIANA STORM: Ny fitambaran'ny tafio-drivotra mampidi-doza sy ny onja mahery vaika dia hampiakatra ny haavon'ny rano eo ambonin'ireo ambaratonga fampitandremana amin'ny rivodoza akaikin'ny sy avaratry ny afovoan'i Irma. Akaiky ny morontsiraka, ny onja dia hiaraka amin'ny onja lehibe sy manimba.
Nosy Turks sy Caicos… 15 ka hatramin'ny 20 ftSoutheheast sy afovoany Bahamas… 15 ka hatramin'ny 20 ft
Bahamas atsimo atsinanana sy afovoany… 15 hatramin'ny 20 ft
Morontsiraka avaratry ny Repoblika Dominikana… 3 ka hatramin'ny 5 ft
Morontsiraka avaratry Haiti sy ny Hoalan'i Gonave… 1 ka hatramin'ny 3 ft
Morontsiraka avaratr'i Cuba amin'ny faritra fampitandremana… 5 ka hatramin'ny 10 ft
Ny fampifangaroana ny tafiotra mahery vaika atahorana ny ainy sy ny onja dia hiteraka tondra-drano miakatra hatrany amoron-tsiraka avy eo amoron'ny morontsiraka. Ny rano dia antenaina hahatratra ireto haavo HEVITRA etsy ambony ireto raha toa ka miseho ny onja tampoka amin'ny fotoanan'ny safo-dranomasina…
Morontsiraka avaratry ny Puerto Rico… 2 ka hatramin'ny 4 ft
Morontsiraka atsimo Puerto Rico… 1 ka hatramin'ny 3 ft
Ny rano ao Etazonia sy ny Nosy Virijina Britanika dia hihena tsikelikely anio alina sy alakamisy.
Ny rano lalina indrindra dia hitranga manamorona ny morontsiraka eo akaiky eo amin'ny faritra misy ny rivotra mifamoivoizana, izay hiarahan'ny onja mahery sy manimba. Ny tondra-drano mifandraika amin'ny Surge dia miankina amin'ny fotoana ijananan'ny fiakaram-be sy ny tsingerin'ny onja, ary mety miovaova be amin'ny lavitra. Raha mila fampahalalana manokana ho an'ny faritra misy anao dia azafady mba jereo ireo vokatra navoakan'ny biraon'ny toetr'andro nasionaly momba ny toetrandro.
Rivotra: ny rivodoza mahery sy ny tafio-drivotra no hitohy miitatra miankandrefana amin'ireo ampahan'i Puerto Rico anio alina. Ny fepetra amin'ny rivodoza dia antenaina hanomboka ao anatin'ny faritra fampitandremana ny rivo-doza any amin'ny Repoblika Dominikanina sy Haiti ny alakamisy alakamisy, miaraka amin'ny toetr'andro tafio-drivotra manomboka anio hariva. Ny fepetra amin'ny rivodoza dia antenaina hanombohana ao amin'ny faritra fampitandremana any atsimo atsinanan'i Bahamas sy any amin'ny Nosy Turks ary Caicos amin'ny alakamisy faran'ny alakamisy miaraka amin'ny toetr'andro tafio-drivotra. Ireo toe-javatra ireo dia hiparitaka any Bahamas afovoany amin'ny alakamisy alina na ny zoma maraina.
Ny rivodoza sy ny tafio-drivotra tropikaly dia azo atao ao anatin'ny faritra fiambenana any Kiobà amin'ny zoma. Antenaina hanomboka ao anatin'ny faritra fampitandremana any Kiobà ny alakamisy alina ny toedraharaha-doza.
RAINFALL: Irma dia antenaina hamokatra ireto fanangonana orana manaraka ireto hatramin'ny Sabotsy:
Nosy Leeward Avaratra… fanampiny 1 ka hatramin'ny 3 santimetatra. Rivo-doza mitotaly 8 ka hatramin'ny 12 santimetatra, 20 santimetatra mitoka-monina.
Puerto Rico avaratra atsinanana sy ny Nosy Virijiny Britanika sy Etazonia… 6 ka hatramin'ny 12 santimetatra, 20 santimetatra mitoka-monina. Puerto Rico Andrefana… 3 ka hatramin'ny 6 santimetatra, 10 santimetatra mitokana.
Ny Nosy Leeward atsimo, ary Saint Croix… 2 ka hatramin'ny 4 santimetatra.
Bahamas atsimo atsinanana, Bahamas afovoany, ary ny Tiorka sy Caicos… 8 ka hatramin'ny 12 santimetatra, mitokana 20 santimetatra.
Repoblika Dominikanina Avaratra sy avaratr'i Haiti… 4 ka hatramin'ny 10 sentimetatra, 15 santimetatra mitoka-monina.
Kiobà Atsinanana sy Afovoany… 4 ka hatramin'ny 10 sentimetatra, 15 santimetatra mitokana.
Haiti Andrefana Andrefana… 1 ka hatramin'ny 4 santimetatra.
Amin'ny faritra rehetra, ity oram-be ity dia mety hiteraka tondra-drano sy fihotsahan'ny fotaka mandrahona ny ainy.
SURF: hisy fiantraikany amin'ny nosy Leeward, Puerto Rico, ny Nosy Virgin, ny atsimo atsinanan'i Bahamas, ny Nosy Turks ary ny Caicos, ny morontsiraka avaratra Dominikanina
Repoblika, ary ny ampahany amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Etazonia mandritra ny andro vitsivitsy. Ireo fivontosana ireo dia mety hiteraka fisamboaravoaran-doza atahorana ny fiainana ankehitriny. Azafady mba jereo ny vokatra avy amin'ny biraon'ny toetr'andro eo an-toerana.
Tonga niharam-boina ny filoha Trump taorian'ny nandravan'ilay rivodoza Irma ny fananany dolara 16.9 tapitrisa dolara
Mponina sy mpizahatany namindra an'i Florida: ny rivodoza Irma dia "Superstorm" ankehitriny